Sheeko La Yaab Leh Oo Dalka Israaiil Ka Dhacday .. Qof Ka Shaqeeya Nadaafada Guriga Wasiirka Difaaca Oo Noqday Basaas Iran
Israel ayaa basaasnimo ku eedeysay qof ka mid shaqaalaha nadaafadda ee guriga wasiirka difaaca Benny Gantz, ayada oo sheegtay inuu yaboohay inuu ka jaajuuso wasiirka, isaga oo matalaya “qof xiriir la leh Iran.”
Bayaan ay soo saartay ayey hay’adda amniga gudaha ee "Shin Bet" ku sheegtay in qofka la tuhunsan yahay oo lagu magacaabo Omri Goren uu la shaqeynayey qof ay ku xiriireen baraha bulshada oo wakil ka ah Iran.
Shin Bet waxa ay sheegtay in tuhmanaha, oo shaqooyin nadaafad iyo adeegyo kale ah ka qabtay guriga wasiir difaaca Mr. Gantz, lagu soo oogay dacwad basaasnimo, isaga oo la horgeeyey maxkamad ku taalla magaalada Lod, oo ku dhow magaalada Tel Aviv .. Shin Bet ayaa ku warrantay in Omri Goren la xiray kadib baaritaan la sameeyey horraantii bishan.
Xafiiska Difaaca Dadweynaha, oo qareen u qabtay Omri si gacan loo siiyo, ayaa ku dooday inuu sidan u sameeyey "dhibaato dhaqaale darteed" ee ujeedkiisu aan aheyn inuu dhaawaco amniga qaranka.
Bayaanka ay soo saartay ayey "Shin Bet" ku sheegtay in inkasta oo Omri uu khatar ku ahaa amniga qaranka, haddana “uusan gacanta ku dhigin sir culus, oo aanu u gudbin qofka kale ee uu la shaqeynayey.”
Hay'ada Shin Bet ayaa sheegtay inay billowday dib u eegis gudaha hay’adda ah oo ku saabsan qaabka loo hubiyo taariikhda iyo sooyaalka dadka laga shaqaaleysiiyo guryaha madaxda sare